Macalinka Cusub Ee Tottenham Oo Go'an Cusub Kasoo Saaray Iibinta Harry Kane Ee Xagaagan
HomeWararka CiyaarahaMacalinka Cusub ee Tottenham oo go’an Cusub kasoo saaray iibinta Harry Kane ee Xagaagan
Macalinka Cusub ee Tottenham oo go’an Cusub kasoo saaray iibinta Harry Kane ee Xagaagan
July 2, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Tababaraha cusub ee kooxda Tottenham Hotspur Nuno Espirito Santo ayaa lagu soo waramayaa in loo xaqiijiyay in Harry Kane uusan ka tagi doonin kooxda xagaagan.
27 jirkaan ayaa isha ku haya inuu koox cusub ka raadsado suuqa haatan jira, iyadoo kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Manchester City iyo Manchester United ay sii wadayaan xiisaha ay u qabaan.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Daily Mail , maamulaha Spurs ee soo socda Nuno ayaa loo sheegay in kooxda aysan dooneynin inay u ogolaato kabtanka England inuu baxo ka hor xilli ciyaareedka 2021-22.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in tababaraha reer Portugal uu isku diyaarinayo inuu Kane ku daro kooxdiisa xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo gudoomiyaha kooxda caasimada Daniel Levy uu diidan yahay dalabyada.
Man City ayaa la rumeysan yahay inay diyaar u tahay inay bixiso lacag dhan 100 milyan oo ginni oo ah saxiixa weeraryahanka, laakiin Levy ayaa loo maleynayaa inuu ku qiimeynayo xiddiga kooxda 150m.
Kane ayaa dhaliyay 221 gool 336 kulan oo uu u saftay Spurs tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan 33 gool 49 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkii 2020-21, halka uu sidoo kale gacan ka geystay 17 caawin xilli ciyaareedkii hore.
Xagaagan, weeraryahankan ayaa shabaqa soo taabtay hal jeer afartii kulan ee uu u ciyaaray England Euro 2020.